डा. श्रेष्ठले दिइन् मृगौला जोगाउने टिप्स
कात्तिक १७, २०७४ मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रकी चिकित्सक कल्पना श्रेष्ठले मृगौला रोगीहरुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मधुमेह भएको बताउँछिन् । संसारमै मुधुमेह रोगीमा ५० प्रतिशतमा मृगौला फेल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
स्वस्थ्यकर खानपान, अव्यवस्थित जीवनशैली, व्यायाम र शारीरिक परिश्रमको कमी लगायतका कारण मृगौला फेल हुने उनको भनाइछ ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार यी कारणले मृगौला फेल हुन्छ
मधुमेह र उच्च रक्तचाप समस्या हुनु
शरीरमा पानीको हुनु ।
प्रोस्टेटको आकारमा बृद्धि
जन्मजात पिसाब नलीमा खराबी
लामो समय पेनकिलरको प्रयोग
मृगौला बचाउँन यस्तो कुरामा ध्यान दिनुस्
डा. श्रेष्ठले मृगौला बचाउन निम्न कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिइन्
स्वास्थ व्यक्तिले पनि वर्षमा एकपटक रगत र पिसाब परिक्षण गराउने ।
औषधी सेवान गरीरहेका दिर्घ रोगीहरुले प्रत्यक ६ महिनामा मृगौला परिक्षण गराउनु पर्छ ।
रक्तचाप र मधुमेहको नियमित परिक्षण गरी नियन्त्रणमा राख्ने ।
जथाभावी औषधी सेवन नगर्ने ।
प्रशस्त मात्रामा शुद्धपानी पिउने ।
स्वास्थ जीवनशैली अपनाउने ।
स्वास्थ्यकर र पोसिलो खाना खाने ।
हिरोइन शिल्पामाथि कसले गर्‍यो अस्ट्रेलियामा दुर्व्यवहार अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीमाथि अस्ट्रेलियामा दुव्र्यवहार भएको छ । अस्ट्रेलियाको सिड्नीबाट मेलबर्न यात्राको क्रममा शिल्पाका साथ आपत्तिजनक व्यवहार भएको हो । शिल्पाले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको जानका...
माल्दीभ्समा सोलिह युगको आरम्भ, अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित